विश्वकप क्रिकेटः इंग्ल्याण्डको विकेटमा प्रभावशाली हुन सक्ने ५ स्पिनर ? | | Neplays.com
विश्वकप क्रिकेटः इंग्ल्याण्डको विकेटमा प्रभावशाली हुन सक्ने ५ स्पिनर ?
By Neplays	 Last updated May 19, 2019
नेप्लेज, ४ जेठ । इंग्ल्याण्डमा शुरु हुने विश्वकपको पीच कस्तो होला सबैलाई उत्सुकता छ । त्यहाँको गर्मी मौसमलाई हेरेर क्रिकेट विश्लेषकहरुले स्पिनरका लागि यो विश्वकप खास हुने बताउँदै आएका छन् ।
जहिलेदेखि एकदिवसीय क्रिकेटमा २ वटा नयाँ बलको प्रयोग हुन थाल्यो त्यसपछि स्पिनरले ब्याट्सम्यानलाई हैरान बनाउन थालेका हुन् । मध्यक्रममा विकेट लिनका लागि स्पिनर प्रयोग गर्ने चलन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा बढ्दो क्रममा रहेकाले आसन्न विश्वकपमा पनि स्पिनरको प्रर्दशनमा धेरैको ध्यान केन्द्रीत हुने छ ।
१. इमरान ताहिर (दक्षिण अफ्रिका)
इमरान ताहिर आउँदो विश्वकप खेल्ने पाका खेलाडीमा पर्छन् । उनको यो अन्तिम विश्वकप पनि हो । बुढो बागको संज्ञा पाएका ताहिर नै दक्षिण अफ्रिकाको स्पिन बलिङका महत्वपूर्ण हतियार हुन् । अहिलेसम्म विश्वकप जित्न नसकेको दक्षिण अफ्रिकाका लागि स्पिन बलर रोज्दा इमरान ताहिर पहिलो रोजाईमा पर्छन् ।
कप्तान फाप डु प्लेसिसलाई विकेटको आवश्यकता पर्दा ताहिरको हातमा बल हुन्छ र उनले कप्तानलाई निराश पनि पारेका छैनन् । ९८ एकदिवसीय क्रिकेटमा उनले १६२ विकेट लिइसकेका छन् । उनको उत्कृष्ट प्रदर्शन ४५ रन खर्चिएर ७ विकेट हो । जारी समयमा उनको फर्म उत्कृष्ट छ । हालै आईपीएल क्रिकेटमा सर्वाधिक २६ विकेट लिएर पर्पल क्याप पनि जितेका थिए ।
२. सकिब अल हसन (बंगलादेश)
३२ वर्षीय सकिब उल हसनले बंगलादेशको स्पिन कमान सम्हाल्ने छन् । अनुभवी अलराउण्डर हसन टिमलाई आवश्यक परेकाबेला विकेट निकाल्ने क्षमता राख्छन् । सकिबले अहिलेसम्म १९८ एकदिवसीय क्रिकेटमा २४९ विकेट लिएका छन् । उनकै प्रदर्शनका कारण बंगलादेशले टेस्ट, एकदिवसीय र टी–२० मा सफलता पनि हात पारेको छ । तर सकिब अहिले चोट ग्रस्त रहेकाले उनी खेल्ने या नखेल्ने अझै तय नहुँदा बंगलादेशी टिम भने तनावमा रहेको छ ।
३.नाथन लायन (अस्ट्रेलिया)
नथन लायन अस्ट्रेलियाको टेस्ट टिमका महत्वपूर्ण सदस्य हुन् । तर सिमित ओभरको खेलको अनुभव भने उनीसँग त्यती छैन् । अहिलेसम्म जम्मा २५ वटा एक दिवसीय क्रिकेट मात्रै खेलेका छन् । लायनको यो पहिलो विश्वकप पनि भएकाले स्पिन आक्रमणको जिम्मा उन कै हुने छ । उनको बललाई टर्न गर्ने र बाउन्स गर्ने क्षमताका कारण अस्ट्रेलियाली टिमका महत्वपूर्ण सदस्य हुन् ।
४. रासिद खान (अफगानिस्तान)
अफगानिस्तानका लेग स्पिनर पछिल्लो समयदेखि खेलमा निकै सुधार गरेका छन् । रासिद आईसीसी एकदिवसीय वरियतामा तीन नम्बरमा छन् । २ वर्षदेखि लगातार शानदार फर्ममा रहेको अफगान टिमको सफलतामा उनको ठूलो हात रहेको छ । उनले फिल्डिङ गर्दा रन रोक्ने र बलिङ गर्दा विकेट लिने कलाका कारण ब्याट्सम्यानहरुलाई रन बनाउन अप्ठेरो हुने छ । आईपीएलको १२ औं संस्करणमा रासिदे १५ खेलमा १७ विकेट लिएका थिए ।
५. कुलदीप यादव (भारत)
भारतका चाइनाम्यान स्पिनर कुलदीप यादव आसन्न विश्वकपमा उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । भारतले अन्तिम एक दिवसीय २०१८ मा इंग्ल्याण्ड भ्रमणमा कुलदीपले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै इंग्लिस ब्याट्सम्यानलाई हैरान पारेका थिए ।
तीन म्याचको सिरिजमा कुलदीपले ९ विकेट लिए । यो सिरिज भारतले २–१ ले जितेको थियो । कुलदीपले अहिलेसम्म ४४ एकदिवसीय क्रिकेटमा ८५ विकेट लिएका छन् ।
भर्खरै सम्पन्न आईपीएल क्रिकेटमा कोलकता नाइट राइडर्सबाट खेल्दा ९ खेलमा जम्मा ४ विकेट हात पारे । तर पनि उनी विराट कोहलीको सेनाका महत्वपूर्ण सदस्य मानिन्छन् ।